Serasera sy asa an-gazety :: Nankatoavin’ny governemanta tsy nisy fanitsiana ilay volavolan-dalàna • AoRaha
Serasera sy asa an-gazety Nankatoavin’ny governemanta tsy nisy fanitsiana ilay volavolan-dalàna
Resy lahatra tamin’ireo fanitsiana nentina tamin’ny volavolan-dalàna hifehy ny serasera ny governemanta. Nankatoavin’ireo mpikambana eo anivon’ny rafitra mpanatanteraka tsy nisy fani­tsiana ity volavolan-dalàna naroson’ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina ity nandritra ny Filankevitry ny governemanta, teny Mahazoarivo, afak’omaly.
«Taorian’ny fankatoavana dia hatolotra hodinihin’ny parlemanta amin’ny fivoriana ara-potoana faharoa hotante­rahina amin’io volana oktobra ho avy io ny volavolan-dalàna », hoy ny fanambaràna nova­kian’i Fanahimanana Tiaray, tale jeneralin’ny serasera, teny Nanisana, omaly.
Notsindriany ihany koa fa efa nisy ny fakan-kevitra na­taon’ny minisitera tamin’ireo mpisehatra eo amin’ny tonto­lon’ny serasera sy ny asa an-gazety mialoha ny nandra­fetana an’ity volavolan-dalàna ity. « Isaorana, araka izany, ny governemanta nanome lanja an’ireo hetahatan’ny mpanao gazety ireo », hoy hatrany ny tale jeneraly.
Veliranon’ny filoham-pirenena :: Vonona hanampy ny governemanta ireo mpiara-miombon’antoka